प्रहरीलाई गुण्डा नाइकेको प्रशिक्षण ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रहरीलाई गुण्डा नाइकेको प्रशिक्षण ?
प्रकाशित मिति २६ पुष २०७५, बिहीबार २१:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । गुण्डा नाइके राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङ्गेले नेपाल प्रहरीको मानमर्दन गर्दै हिँड्न थालेका छन् । गुण्डा नाइके मनाङ्गेले प्रहरीलाई आफू जस्तै गुण्डा देख्न थालेका छन् । उनले नेपाली प्रहरीको उच्च अधिकारीहरूको नामै लिएर देशका गुण्डाहरू समेत भन्न भ्याएका छन् ।
गुण्डा नाइके मनाङ्गेको यो चर्तिकलाबाट प्रहरी मुख्यालय रिसाएको छ । मनाङे सुध्रिएनन् भने प्रहरीले फेरि खोरमा थुन्ने पक्का छ । प्रहरीलाई नै गुण्डा भनेर बद्नाम गर्दै हिंडेपछि प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि जवानसम्म रिसाएका छन् । स्रोतका अनुसार गुण्डा नाइके मनाङ्गेका सबै हिसाव कितावलाई प्रहरीले संकलन गर्न थालेको छ ।
हत्या अभियोगमा सजाए पाएका र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका मनाङ्गे पछिल्लो समय प्रदेश सभाको सांसद पदको सपथका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । उनी विशेष गरेर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको घरदैलो चाहर्ने गरेका छन् ।
मनाङ्गेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङलाई पनि भेटेर सपथका लागि लविङ गरेका छन् । मनाङ्गेले ‘रेशम चौधरीले सपथ लिन हुन मैले किन सपथ लिन नपाउने ?’ भनेर नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन् । बिगतको आपराधिक छवि सुधार्ने योजनामा रहेका र सबै कालोधन सेतो बनाउने योजना बनाएका मनाङ्गेलाई अझै पनि धेरै चुनौती छ ।
गुण्डा नाइके मनाङ्गेको विगतको क्रिमिनल रेकर्डका कारण नेताहरूले साथ दिन हच्किएका छन् । तैपनि मनाङ्गेले यसै हप्ताभित्र सपथ लिने भनेर जोडबल गरिरहेको एक नेताले बताए । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका मनाङ्गे तत्कालीन एमालेको साथ र सहयोगमा मनाङ जिल्लाबाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि मनाङेले सपथको कुरा पु¥याएको चर्चा बालुवाटारमा छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )
जनकपुरधाम । करिब एक महिनाअघि भएको अढाई वर्षीय बालकको हत्यामा धामीको संलग्नता पुष्टि भएको छ ।
धनुषा मिथिला नगरपालिका–६, ढल्केबरका…
अमेरिकामा मतदाता मनाउने अन्तिम कसरत
काठमाडाैं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसदीय चुनाव हुनुभन्दा दुई दिनअघि रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट्सले मतदाताहरूलाई आफ्नो तर्फबाट अन्तिममध्येका केही अपील…
गोरखा । हत्याको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका–१ का ६८ वर्षीय तेन्जेङ दोर्जे…
पोखरा । पोखराको फेवातालमा प्याडल बोर्डबाट खसेर बेपत्ता एक युवाको शव आज बिहान फेला परेको छ ।
मङ्सिर २४ गते…